Asian Workers News Myanmar ver. Feb. 2013 by SO MI - issuu
အာရှလုပ်သားသတင်းစာ ၂၀၁၃ . ၂ . ၂၆
အမှတ်စဉ်( ၇ )
၂၀၁၃ခုနှစ်မှစတင်၍ လုပ်သားအင်အား ၅ယောက်အောက်စက်ရုံများလည်း ထွဲဂျစ်ဂုမ်(လုပ်သက်ဆုကြေး)၁၀၀% ရမည်။ ၂၀၁၃ခုနှစ် ၁လပိုင်း ၁ရက်မှ စတင်၍ အချိန်ပြည့်လုပ်သား ၄ယောက်
ထွဂျဲစ်ဂုမ် (လုပ်သက်ဆုကြေး) ကို ဘယ်လိုတွက်ချက်သလဲ ..
နှင့်အောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်သော စက်ရုံများ တွင်လည်း ထွဂျဲစ်ဂုမ်
လုပ်သက် ၁နှစ်အတွက် ရက် ၃၀၏ ပျမ်းမျှလုပ်အားခကို ခံစားခွင့်
(လုပ်သက်ဆုကြေး) ၁၀၀% ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ယခင်ကမူ အချိန်
ရှိသည်။ ထွဂျဲစ်ဂုမ် (လုပ်သက်ဆုကြေး) တွက်ချက်ရန် အလုပ်ဝင်ရက်
ပြည့်လုပ်သား ၅ယောက်နှင့် အထက် စက်ရုံများတွင်သာ ခံစားခွင့်
ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ခုနှစ် ၁၂လပိုင်း ၁ရက်မှ စတင်ကာ အချိန်ပြည့်လုပ်သား
လုပ်အားခရှင်းတမ်း လစာစာရွက်များ လက်ဝယ်ရှိလျှင် အကောင်း
၅ယောက်အောက် စက်ရုံများတွင်ပါ ထွဂျဲစ်ဂုမ် (လုပ်သက်ဆုကြေး)
အား အချိုးကျ ခံစားခွင့်ရှိသည်ဟု့ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်
ထွဂျဲစ်ဂုမ် = ၁ ရက်ပျှမ်းမျှလုပ်အားခ×လုပ်သက်ရက် ÷ ၃၆၅ရက်
ခဲ့သည်။ အကယ်၍ လူကြီးမင်း အလုပ်လုပ်ကိုင်သော စက်ရုံတွင် လုပ်သားအင်အား ၅ယောက်အောက် ရှိပါက အောက်ပါ အချက်များ
ကို သေချာစွာ လေ့လာမှတ်သားသင့်ပါသည်။ ၂၀၁၂ခုနှစ် ၁၂လပိုင်း ၃၁ရက် အထိ ထွဂျဲစ်ဂုမ်၏ ၅၀% ၂၀၁၃ခုနှစ် ၁လပိုင်းမှ စတင်၍ ထွဂျဲစ်ဂုမ်၏ ၁၀၀% လုပ်သား ၅ယောက်အောက် စက်ရုံတွင် အလုပ်လုပ်ပါက ၂၀၁၀ခုနှစ် ၁၂လပိုင်း ၁ရက်မှ ၂၀၁၂ခုနှစ် ၁၂လပိုင်း ၃၁ရက်အထိ ကာလအား ထွဂျဲစ်ဂုမ်၏ ၅၀% ရရှိမည်ဖြစ်ကာ ၂၀၁၃ခုနှစ် ၁လပိုင်း ၁ရက်မှ စတင်၍ ထွဂျဲစ်ဂုမ်၏ ၁၀၀%ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အလုပ်ရှင်သည် လုပ်သားက အလုပ်ရပ်ဆိုင်းပြီးနောက် ၁၄ရက်အတွင်း ထွဂျဲစ်ဂုမ်ကို ပေးချေရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုသို့ ပေးချေခြင်းမရှိပါက နယ်မြေ အလုပ် သမားရုံးတွင် တိုင်ကြားနိုင်သည်။ ပေးချေရန် ပျက်ကွက်သူ အလုပ်ရှင် သည် ထောင်ဒါဏ် ၃နှစ်ဖြစ်စေ ငွေဒါဏ် ဝမ်သိန်း၂၀၀ဖြစ်စေ ကျခံ
သတင်းစာ အကြံပြုချက်တွင် ဖတ်ရှု့ပါ)
ထွဂျဲစ်ဂုမ် (လုပ်သက်ဆုကြေး) ကို ဘယ်လိုလူတွေ ရသလဲ .. လုပ်သားက မိမိသဘောဖြင့် အလုပ်ထွက်သည်ဖြစ်စေ အလုပ်ရှင်မှ အလုပ်ဖြုတ်သည်ဖြစ်စေ လုပ်သက် ၁နှစ်အထက်ရှိပါက ထွဂျဲစ်ဂုမ် (လုပ်သက်ဆုကြေး) ခံစားခွင့်ရှိသည်။ စက်ရုံအား ရက်ရှည်ပိတ်ခြင်း ၊ ကျန်းမာရေးကြောင့် အနားယူချိန် နှင့် စက်ရုံတွင်း လေ့ကျင့်သင်ကြား ချိန် ကာလများပါ လုပ်သက်အတွင်း အကျုံးဝင်သည်။ သို့သော် လုပ်သက် ၁ နှစ်အောက်နှင့် အလုပ်ချိန် ၄ ပါတ်တွင် ပျမ်းမျှ တစ်ပါတ် လျှင် အလုပ်ချိန် ၁၅နာရီ အောက်သာရှိသော အလုပ်သမားများမှာမူ ခံစားပိုင်ခွင့် မရှိပေ။
၂၀၁၃ခုနှစ် အခြေခံလုပ်အားခ တစ်နာရီ ၄၈၆၀ ဝမ် / တစ်ရက် ၃၈,၈၈၀ ဝမ် ၊ ၂၀၁၃ခုနှစ် အခြေခံလုပ်အားခမှာ တစ်နာရီ ၄,၈၆၀ ဝမ်ဖြစ်ပါသည်။
၆.၁ % တက်လာပါသည်။ အခြေခံလုပ်အားခမှာ နိုင်ငံတော်မှ သတ် မှတ် ပြဌါန်းသော လုပ်အားခများထဲမှ အနိမ့်ဆုံးဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ် ၁လပိုင်း ၁ရက်မှ ၁၂လပိုင်း ၃၁ရက် အထိ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ အလုပ်ရုံများမှ အလုပ်သမား အားလုံးခံစားခွင့်ရှိသည်။ သို့သော် E-10 ဗီဇာဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော ရေလုပ်သားများမှာမူ “အခြေခံအလုပ်သမား ဥပဒေ” အစား “သင်္ဘောသား ဥပဒေ” အရသာ ခံစားခွင့်ရှိသည်။ လက်ရှိ
၁၀ သိန်း ၄ သောင်း ဝမ်ဖြစ်သည်။ *၂၀၁၃ခုနှစ် ၁လပိုင်း ၁ရက် ~ ၁၂လပိုင်း ၃၁ရက် အထိ အခြေခံ လုပ်အားခ* ၁နာရီကြေး
၃၈,၈၈၀ ဝမ် (နာရီကြေး×၈နာရီ) ၁ပါတ် ၄၀ နာရီ
၁ပါတ် ၄၄ နာရီ
၁,၀၉၈,၃၆၀ ဝမ်(နာရီကြေး×၂၂၆နာရီ) အာရှလုပ်သားသတင်းစဉ်
လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုံ့ ကိုရီးယါးလူမျိုးနှင့် လက်ထပ်သူ အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီးများ “ကိုရီးယါးနိုင်ငံတွင် နေထိုင်နိုင်ခွင့် ရရှိရေး ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှု့” စတင်ခြင်း .. ရွှေ့ပြောင်းအမျိုးသမီးဥပဒေအကြံပေးရေးရုံး “မန်းဂိုးနက်” ဂင်မင်ဂျောင်း နှစ်စဉ် ကိုရီးယါးလူမျိုးနှင့် လက်ထပ်သူ နိုင်ငံခြားသား အမျိုးသမီး
၅) နိုင်ငံသားလျှောက်ထားခြင်းနှင့် အမြဲနေထိုင်ခွင့် လျှောက်ထားရာ
ပေါင်း သုံးသောင်းခန့် ကိုရီးယါးနိုင်ငံအတွင်း ဝင်ရောက်လျှက် ရှိကာ
တွင် လက်မခံနိုင်ဖွယ် ဖြစ်စေသော အချက်များ ရှိပါသလား ..
အဆိုပါ အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီးများသည် “မှီခို” အနေဖြင့်သာ
ဆုံးဖြတ်ချက် (သို့) တရားရုံးတွင် အမှု့ရင်ဆိုင်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
နေကြရသည်။ ကွာရှင်း ပြတ်ဆဲခြင်းဖြစ်စေ သီးခြားစီ ခွခွဲါနေထိုင်
၆) လူဝင်မှု့ကြီးကြပ်ရေးရုံး၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ အပေါ် ကျေနပ်မှု့
ခြင်းဖြစ်စေ မည်သို့သော အကြောင်းကြောင့်မဆို “မှီခို” ဟူသော
၁) မိမိတစ်ဦးတည်း အတွက်သာ မဟုတ်ပဲ မိမိ၏ မိတ်ဆွေများ
အကြောင်းပြချက်နှင့် တိကျသော သက်သေကို တင်ပြနိုင်မှသာလျှင်
ကိုရီးယါးနိုင်ငံတွင် တရားဝင် ဆက်လက် နေထိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အကြံပေးရေး ရုံးများနှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ကာ နည်းလမ်းကို ရှာဖွေပါ။
သို့သော် အဆိုပါ ကိစ္စမှာ တစ်ဦးတည်း အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်
၂) သေချာပေါက် လွယ်ကူသော အလုပ်မဟုတ်သည့်အတွက် ၁နှစ်
၂နှစ် ကြာသည့်တိုင် အဆင်မပြေသည်လည်း ရှိနိုင်သည်။ သို့သော်
အမျိုးသမီးများနှင့် အတူလက်တွဲ လုပ်ဆောင်နေသော လူ့အခွင့်
အရေး အဖွဲ့များသည် “နိုင်ငံခြားသား အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီး
များ ကိုရီးယါးနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်ခွင့် ရရှိရေး လှုပ်ရှားမှု့” ကို စတင်
ဒီလိုမျိုး အခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့နေရပါသလား ..
၁) ခင်ပွန်းသည် မပါပဲ တစ်ဦးတည်း နိုင်ငံသားလျှောက်လွှာတင်ရန်
သွာစဉ် ခင်ပွန်းသည်ကို ခေါ်လာခဲ့ဖို့ ပြောတာ ခံရပါသလား .. ☞ လူဝင်မှု့ကြီးကြပ်ရေးရုံးသည် ခင်ပွန်းသည်နှင့် အတူတကွ မလာ ရောက်သော်လည်း
<နိုင်ငံခြားသား အမျိုးသမီးအကြံပေးရေးအဖွဲ့ ဖုန်းနံပါတ်များ>
ထုတ်ပြန်ကြေငြာထားပါသည်။ သို့သော် ခင်ပွန်းသည်ထံမှ မလာ
ရောက်နိုင်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာကို တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။
ယူလာရမည်ဟု့ ပြောပါသလား ..
☞ ပိုက်ဆံမရှိပါက လက်ရှိအချိန်တွင် အလုပ်ရှိကြောင်း “အလုပ်ဝင်
ဓါတ်ပုံ ၊ ကလေးဖခင်၏ ထောက်ခံချက်၊ ထောက်ပံ့ကြေး ပေးနေ
၂) နိုင်ငံသားလျှောက်လွှာ (သို့) အမြဲနေထိုင်ခွင့် လျှောက်ထားစဉ် လူဝင်မှု့ကြီးကြပ်ရေးရုံးမှ ဝမ် သိန်း ၃၀၀ တန် အိမ်အငှား စာချုပ်ကို
ထောက်ခံစာ” တင်ပြလျှင် ရပါသည်။ ၃) ကွာရှင်းပြတ်ဆဲသည့်အခါ အကြောင်းပြချက် မခိုင်လုံဟု ဆိုကာ နေထိုင်ခွင့် ဗီဇာကို သက်တမ်း မတိုးပေးဟု့ ပြောပါသလား .. ☞ ရွှေ့ပြောင်းအမျိုးသမီး အကြံပေးရုံးများနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကာ အကူအညီ ရယူပြီးနောက် လူဝင်မှု့ကြီးကြပ်ရေးရုံးတွင် ထပ်ဆင့် လျှောက်ထားကာ အမှု့ရင်ဆိုင်နိုင်ခွင့် ရှိသည်။ ၄) သားသမီးများနှင့် တွေ့ဆုံခွင့် တရားဝင် ရရှိထားသော်လည်း နေထိုင်ခွင့် ဗီဇာကို တိုးမပေးတာနှင့် ကြုံနေရပါသလား .. ☞ ကလေးနှင့် ဆက်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း သက်သေပြနိုင်မည့် သက်သေခံချက်ရှိလျှင်
သက်သေခံချက်များ မရှိပါကလည်း အယူခံဝင်ခွင့် ၊ တရားရုံးသို့ ဦးတိုက် လျှောက်ထားခွင့် ရှိပါသည်။
ဟွာဆောင်းရှိ စက်ရုံတစ်ရုံ မီးလောင်
ရသော နေထိုင်ခွင့် ဗီဇာမရှိသူ နိုင်ငံခြားသားများ ရဲစခန်းသို့ အမှု့ဖွင့်
ဗီယက်နမ် အလုပ်သမား ၂ဦး သေဆုံး ။
တိုင်ကြားပါက တိုင်ကြားသော နစ်နာသူ(ဗီဇာမရှိသူ) သာ ကိုရီးယါး နိုင်ငံမှ ထွက်ခွါပေးရသည့် အတွက် တိုင်ကြားရန် မဝံ့ရဲကြသော
၂လပိုင်း ၃ရက်နေ့က ဂယောင်းဂီဒိုနယ် ဟွာဆောင်းမြို့ရှိ စက်ရုံ တစ်ရုံတွင် လူနေဆောင်အဖြစ် အသုံးပြုသော ကွန်တိန်နာ တစ်လုံး မီးလောင်မှု့ဖြစ်ပွားရာ အဆိုပါ ကွန်တိန်နာအတွင်း အိပ်ပျော်လျှက် ရှိသော
သေဆုံးခဲ့ရသည်။ မီးသည် လူနေဆောင်အဖြစ် ဖန်တီးထားသော
လိမ်လည်သည့် ရာဇဝတ်မှု့များ ဆက်တိုက်
ဖြစ်ပေါ်နေရခြင်း ဖြစ်ပြီး နစ်နာသူများ မိမိတို့၏ နစ်နာမှု့အတွက် ပြန်လည်
ပြဌါန်းပေးရန် လိုအပ်သည်” ဟု့ဆိုကာ ဥပဒေချိုးဖောက် ခံနေရသော နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ မရှိသူ နိုင်ငံခြားသား ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားများ၏ လူ့အခွင့်အရေးကို အကာအကွယ် ပေးရန် တောင်းဆိုလိုက်သည်။ အာရှလုပ်သားသတင်းစဉ်
နှစ်ထပ် ကွန်တိန်နာ တစ်လုံးနှင့် စက်ရုံ အဆောက်အဦး အချို့ကို လောင်ကျွမ်းပြီးနောက်
သည် အဆောက်အဦး ပထမထပ်ရှိ ကွန်တိန်နာ အပြင်ဖက်တွင် လဲကျသေဆုံးနေသော ဗီယက်နမ် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ဗုန်းဂျင်ထန်း
နိုင်ငံခြားသား အမျိုးသမီးများ ကာမပြုကျင့်ခံရမှု့ အတွက်
(၂၄ နှစ်) နှင့် ကွန်တိန်နာ အတွင်း မီးလောင်သေဆုံးနေသော
နိုင်ငံခြားသားနှင့် လက်ထပ်ခြင်း ဆိုင်ရာ အကျိုးဆောင်
စူုဝီလေး (၂၃ နှစ်) တို့ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ရဲနှင့် မီးသတ်ဌါန
ပွစဲားများအား ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူရန်လိုအပ် ။
မီးလောင်မှု့ ဖြစ်ပွားခြင်းလား ဆိုသည်ကို ယခုတိုင် အဖြေရှာမရနိုင်ပဲ စုံစမ်း စစ်ဆေးမှု့များ ဆက်လက် ပြုလုပ်နေဆဲ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ . ၂ . ၃ ဟန်းဂယော်လဲ သတင်းစာ
အကျိုးဆောင်ပစွဲား
ဖမ်းဆီးလိုက်သည်။ ရဲဌါနမှ ပြောခွင့်ရသူ၏ အဆိုအရ ဆုံးမိုသည် ဖီလစ်ပိုင် အမျိုးသမီးများ ကိုရီးယါး အမျိုးသားများနှင့် လက်ထပ်ပြီး နောက်
တည်းခိုရာ နေရာတွင် “ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်မှု့
စွမ်းရည် စမ်းသပ်မှု့” ဟု့ဆိုကာ ကိုယ်ခန္ဓာအား ကိုင်တွယ် စမ်းသပ်၍
“သားသမီးများကို နိုင်ငံသားရအောင် လုပ်ပေးမည်”
ကာမပြုကျင့်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် အသက်မပြည့်သေးသူ ကာမပြုကျင့်
ဟု့ဆိုသော လိမ်လည်မှု့အား သတိထားကြ ..။
သတ်ပြစ်မယ်” ဟု့ ခြိမ်းခြောက် ခဲ့သည်ဟု့ ဆိုသည်။ အဆိုပါ ဗီဇာမရှိ နေထိုင်သော နိုင်ငံခြားသားများအား အဓိကပြစ်မှတ်ထားကာ
“ဖမ်းဆီးနှင်ထုတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးမည်” ၊ “သားသမီးများအား
အမျိုးသမီး ၃ဦးအားလည်း လွန်ခဲ့သော ၂နှစ်တာ ကာလအတွင်း
ခန့်မှန်းခြေ ၂၈ကြိမ်ခန့် ခြိမ်းခြောက်မှု့ ကာမပြုကျင့်မှု့ ပြုခဲ့သည်
လက်ခံရယူသော အမှု့များ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိရာ သတိထား
ဟု့ဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံခြားသား အမျိုးသမီး လူ့အခွင့်အရေး
ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းကို ဦးဆောင်သူ A သည် မိမိတို့၏
နိုင်ငံခြားသား အမျိုးသမီးများ၏ လူ့အခွင့်အရေးအား စောင့်ကြည့်
ကာကွယ်ပေးမည်ဟု့ လိမ်လည်ကာ လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်အတွင်း
စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် တောင်းဆိုလိုက်သည်။ ရဲဌါန၏ ပြောခွင့်
လူပေါင်း ၂၆၀ ဦးထံမှ ဝမ်ငွေ သိန်း ၆၆၀ ကို လက်ခံရယူခဲ့မှု့ဖြင့်
ရသူက ဆုံးမို၏ ဆက်သွယ်ပေးမှု့ဖြင့် လက်ထပ်သူ အမျိုးသမီးပေါင်း
ထောင်ထံ ၁နှစ် နှင့် ၆လ ကျခံရန် အပြစ်ပေးခံခဲ့ရသည်။ အူးလ်ဆန်
၁၀၀ ဦးခန့် ရှိပြီး နစ်နာသူ ဦးရေမှာမူ ထို့ထက် အရေအတွက်
မြိ့တွင် နေထိုင်သူ တရုပ်-ကိုရီးယါး Bသည် ဗီဇာမရှိသူ တရုပ်လူမျိုး
ပိုနိုင်သည်ဟု့ ဆိုကာ နိုင်ငံခြားသား အမျိုးသမီး ကူညီ စောင့်ရှောက်
၂ဦးအား ဗီဇာရရှိရန် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟုဆိုကာ ဝမ်ငွေ သိန်း၂၀၀
ရေး ရုံးများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ အရေအတွက် အတိအကျ သိရှိနိူင်ရန်
လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်
တရားမဝင် နေထိုင်သူ ဗီယက်နမ်လူမျိုးများမှ မွေးဖွားသော သား၊
နစ်နာမှု့ ရှိသူများ အနေဖြင့် နီးစပ်ရာ နိုင်ငံခြားသား အမျိုးသမီး
သမီးများအား မွေးဖွားစာရင်း အတုပြုလုပ်၍ နိုင်ငံသား ခံယူခွင့်ရရန်
ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး ဌါနများနှင့် ရဲဌါနများသို့ အသိပေး တိုင်ကြား
ကူညီမည်ဟု့ ဆိုကာ တစ်ဦးလျှင် ဝမ်သိန်း ၂၅၀ မှ သိန်း ၃၀၀ အထိ
တောင်းခံရယူသော ပွစဲား K အား ဖမ်းဆီး အရေးယူ ခဲ့သည်။ ထိုသို့သော ကိစ္စများအတွက် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များမှ “နစ်နာ
အကြံပြုချက် ပျမ်းမျှလုပ်အားခကို ဘယ်လိုတွက်ချက်သလဲ ? အကြံပြုရေးသားသူ
.. ဂင်မ်ဂုရု (အကြံပေးအဖွဲ့ )
မေး > လုပ်သက်ဆုကြေး (ထွဂျဲစ်ဂုမ်) တွက်ချက်ရာတွင် အဓိက ကျသော “ပျမ်းမျှလုပ်အားခ” ကို ဘယ်လို တွက်ချက် ရပါသလဲ .. ဖြေ > “ပျမ်းမျှလုပ်အားခ” ဟာ လုပ်သက်ဆုကြေးမှ မဟုတ်ပဲ ထိခိုက်မှု့ အာမခံနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ ဆေးကုသစဉ် ထောက်ပံ့လစာ၊ နစ်နာကြေး အစရှိသည်တို့ကို တွက်ချက်ရာမှာလည်း အခြေခံအဖြစ် အသုံးပြုပါတယ်။ ဒါကြောင့် အောက်ပါ အချက်တွေကို သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ “ပျမ်းမျှလုပ်အားခ” ဟာ တွက်ချက်ဖို့ အကြောင်းပေါ်လာတဲ့ နေ့ မတိုင်ခင် ၃လ အတွင်း ကိုယ်ရရှိခဲ့တဲ့ လုပ်အားခ စုစုပေါင်းကို အဲဒီ
ကိုရီးယါးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအသင်းအဖွဲ့ များ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ အကြိုညှိနှိုင်းပြင်ဆင်ရေး အစည်းဝေးပွဲ ကျင်းပနေစဉ်
၃လအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ စုစုပေါင်းရက်(၈၉~၉၂) နဲ့ စားလို့ရလာတဲ့
အဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ကိုရီးယါးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်
သမား အသင်းအဖွဲ့များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွကဲို လာမည့် မတ်လ
(ထွဂျဲစ်ဂုမ်) အတွက်ဆိုရင် အလုပ်ထွက်တဲ့ ရက်မတိုင်ခင် ၃လရဲ့
၁၆ရက်မှ ၁၇ရက်နေ့ အထိ ဒေဂျွန်းမြို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး
တွေ့ဆုံပတွဲင်
ရက်မတိုင်ခင် ၃လရဲ့ လုပ်အားခ အပေါ် အခြေခံပြီး တွက်ချက်တာ
အသင်းအဖွဲ့များ အချင်းချင်း ရင်းနှီးချစ်ခင်မှု့ ရရှိကာ ပိုမိုနီးကပ်စွာ
ချိတ်ဆက်လှုပ်ရှားနိုင်ရေး နှင့် ကိုရီးယါးအစိုးရ၏ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်
ဆိုရာမှာ ပြက္ကဒိန်ပါ ရက်ကို အခြေခံတာကြောင့် ကာလအလိုက်
သမားများ အပေါ် ပြဌါန်းထားသော အလုပ်သမား ဥပဒေများအား
ကွာခြားမှု့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ၅လပိုင်း ၅ရက်မှာ အလုပ်
ကောင်းမွန်မှန်ကန်အောင် ပြုပြင်ပြင်ဆင်နိုင်ရေးတို့အား အလေးပေး
ထွက်တယ်ဆိုရင် အဲဒီရက်မတိုင်ခင် ၃လရဲ့ စုစုပေါင်း ရက်ဟာ
၂လပိုင်း ၅ရက် ~ ၅လပိုင်း ၄ရက် အထိ ၈၉ရက် ဖြစ်ပြီး ၊ ၁၀လပိုင်း အာရှလုပ်သားသတင်းစဉ်
၅ရက်နေ့မှာ အလုပ် ထွက်တယ်ဆိုရင်တော့ ၇လပိုင်း ၅ရက် ~ ၁၀လပိုင်း ၄ရက် အထိ ၉၂ရက် ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ “ပျမ်းမျှလုပ်အားခ”
အစရှိတဲ့ တစ်နှစ်အတွင်း ရရှိခဲ့သမျှ လုပ်အားခ ငွေတွေ အားလုံးကို ထည့်ပေါင်းပြီး တွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ # ၁ရက် ပျမ်းမျှလုပ်အားခ တွက်ချက်ပုံ နောက်ဆုံး ၃လ၏ စုစုပေါင်းဝင်ငွေ + ၁နှစ်အတွင်း ဆုကြေးဘောနပ်စ် + ၁နှစ် ပိတ်ရက်ဆုကြေး ၃လအတွင်း ရက်ပေါင်း
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အသင်းအဖွဲ့
များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအတွက် အကြိုညှိနှိုင်းပြင်ဆင်ရေး အစည်း အဝေးကို ၂လပိုင်း ၁၇ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) က ဘူဆန်မြို့ နိုင်ငံခြား သား အလုပ်သမား ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးရုံး (BFC) တွင် ကျင်းပပြု လုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ ကိုရီးယါးနိုင်ငံ အတွင်း ရှိ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အသင်းအဖွဲ့ပေါင်း (၈) ခုတို့မှ မြန်မာ၊
ဂျောင်းဂူခီး ၊ ဂင်မ်ဆိုလျောင်း ၊ လင်မ်အာယောင်း ဒယ်နေ ၊ လီမီလန် ၊ ဂင်မ်ဂုရု
ပုံထည့်သငွ်းခြင်း
4F Yu-sin Building,193-9 Jeonpo-2dong, Jingu, Busan, Korea
(Postal Code 614-865) အခမဲ့ဖြန့်ဝေသည်။ မှာယူလိုသူ၏ လိပ်စာနှင့် အသင်းအဖွဲ့ များသို့ မဆို ချောစနစ်ဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးသည်။
နီပေါ၊ ပါကစ္စတန်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ဗီယက်နမ်၊
သီရိလန်ကာ အစရှိသော ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အသင်းဝင်ပေါင်း
၂၅ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ အကြိုညှိနှိုင်းပြင်ဆင်ရေး အစည်း
ပေးပို့ထားပါက မှာယူသည့်နေရာတိုင်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးသည်။မည်သည့် နိုင်ငံရပ်ခြား
Asian Workers News Myanmar ver. Feb. 2013
100% Severance pay is also applied to companies and businesses consisting of less than5people